Ukugqitywa kwesiQinisekiso seKhalenda yoHlelo lweShishini | Martech Zone
Ukugqitywa kwesiQinisekiso seKhalenda yoHlelo lweshishini
NgoLwesine, Agasti 16, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ukuba ulishishini elikhulu elinababhali abaninzi, ujongisa wonke umxholo, amaxesha amisiweyo kunye nokunyusa kunokuba yinkqubo enzima yokulawula. Isihlomelo umisele i ikhalenda yokuhlela okwethutyana elidlulileyo kodwa uyiphucule kakhulu ngeempawu ezithile zeshishini:
Ukudityaniswa kweMithombo yeendaba -Lonke unyuselo lwakho lweendaba zosasazo ngoku lubonakalisiwe kwikhalenda yovavanyo olulula kunye nokucwangciswa. Ukuba kukho ingxolo eninzi, unokufihla ukukhushulwa nangaliphi na ixesha.
Ukubonakala kombhali-Bonke ababhali bakho ngoku banokufikelela kwikhalenda kunye nemixholo yemihla ngemihla. Abakwazi ukwenza naluphi na utshintsho okanye ukuhlela kwishedyuli, kodwa siyathemba ukuba oku kubonakala kuphucula unxibelelwano kwisicwangciso sokuhlela ngokubanzi kwiqela lakho.
Imixholo yemihla ngemihla -Khokela ababhali bakho kwaye ucwangcise iqhinga lokuhlela ngokunikezela ngesihloko okanye umxholo wosuku ngalunye. Imixholo inokusetwa ukuba iphinde yenzeke yonke imihla, ngeveki okanye ngenyanga.
Tsala kwaye ulahle ukucwangcisa kwakhona -Khangela umsantsa kwishedyuli yakho yomxholo? Tsala isithuba esingacwangciswanga ukusuka kwibar esecaleni ukuya kwindawo evulekileyo kwikhalenda yakho. Unokutshintsha kwakhona ukunyuswa kwentlalo, nawe.
Ukuthumela ngaphandle kweKhalenda kunye nokwabelana - Iikhalenda zazo zombini izithuba kunye nokunyuselwa kwezentlalo zingathunyelwa kwelinye ilizwe kwaye kwabelwane ngazo kwiikhalenda zangaphandle ezinjengeKhalenda kaGoogle, iCal okanye iKhalenda ye-Outlook. Ezi URLs zokwabelana ngekhalenda zinokunikwa kwabo usebenza nabo kunye nabasebenzi ngokubonakala okuphuculweyo kwimisebenzi yokuthengisa umxholo.
Ukucoca kunye noPhuculo loYilo -Senze uphuculo olubonakalayo kuyilo lwekhalenda, kubandakanya nokongezwa komxholo womxholo kunye neefilitha zenethiwekhi yoluntu. Ukufumana ukujonga ngokubanzi ishedyuli yakho yokuhlela akuzange kube lula.
Isiqulatho liqonga lentengiso elinomxholo elinceda imibutho ibambe kwaye yenze umxholo wokuqala kwindawo enophawu lokusasaza kulo naliphi na ijelo lentengiso. Ukubhengezwa: Ndinezabelo kwiCompendium, ndasebenza apho kwaye ndanceda ukuqala inkampani.
I-SocialTV = Ividiyo + yeNtlalontle
Qala i Free Facebook Store kunye VendorShop